Posky Boeing 777-200 cad, wax dabiici ah, waxba maahan
Su'aal Posky Boeing 777-200 cad, wax dabiici ah, waxba maahan
1 sano 3 bilood ka hor #884 by jung
Mahadsanid, waxaan soo dejiyey Posky B777-200 oo ka yimid Rikooo waxaanay ku soo qaadatay iyada oo la adeegsanaayo saameynta ciriiriga. Waxaan labadoodaba ku rakibay waxaanan leeyahay afar diyaaradood oo ku fadhiya galka diyaaradeyda. Si kastaba ha noqotee, markii aan furo, waa caddaan, ma jiraan wax dabeecado ah, aan lahayn faahfaahin, wax faahfaahin ah, ma jirto bockpit, waxba. Kaliya qolof cad.
Waxaan soo dejiyay oo ku rakibay dhowr B777 kale oo ka yimid Rikooo iyo boggaga kale ee freeware, laakiin had iyo jeer waa isku mid. Waxaan ku dhihi lahaa in FSX-da aan ka walwalsanahay B777. Sidaa oo kale, jidka ayaa, u dhacay De Haviland Dash 8-400. Waxaan sidoo kale soo dirayaa shaashadda dusha cad.
Sideen u xallin karaa tan sida ay u socoto dareemayaasha.
1 sano 2 bilood ka hor #910 by Parky-Joe
map ma la soo bandhigi karaa, idinku weli ma ku qeexan meel.
Geli goobaha ka dibna habeyn ka dibna calaamadeeyso 'hor-u-marinta DirectX 10' sanduuqyadana waa in dhammaantood la joogaa. Hadaan arrintan isku mid ahayn aniga qudhaydu waxaan ogaaday sida loo xalliyo ilaa todobaadkii maxkamadaynta iyo qalad. Uu rajaynayo in uu kuu shaqeeyo.